यो कस्तो वेथिति ? शिक्षक बन्न पनि इसाई नै हुनुपर्ने ! - inaruwaonline.com
यो कस्तो वेथिति ? शिक्षक बन्न पनि इसाई नै हुनुपर्ने !
प्रकाशित मिति: सोमबार, पौष ०९, २०७५ समय: ८:०६:५३
काठमाडौं । गैरसरकारी संस्था ‘टिच नेपाल’ ले गरेको शिक्षकको आवश्यकतासम्बन्धी विज्ञापन विवादमा परेपछि छानबिन सुरु भएको छ।संस्थाले विज्ञापनमा एक प्रशिक्षार्थी शिक्षकको आवेदन माग्दै आवेदक इसाई परिवारको हुनुपर्ने, इसाई कलेजमा पढेको र चर्चको सिफारिस चाहिनेलगायत सर्त राखेको उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा परेको छ।उजुरीपछि संस्थाको छानबिन गरिरहेको ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमराज जोशीले बताए। ‘यस संस्थाका बारेमा केहीले गुनासो गरेपछि छानबिन सुरु भएको हो’, उनले भने।
संस्थाले बालबालिकालाई सकारात्मक वातावरणमा सिकाउने, प्रेमपूर्वक कसरीे, पढाउने तालिम शिक्षकलाई दिँदै आएको बताए। उनले भने, ‘बालबालिकालाई बाइबलले के भन्छ पनि सिकाउँछांै।’ तर धर्म प्रचारमा नलागेको र संस्थामा कुनै पनि विदेशी आबद्ध नभएको दाबी गरे। संस्थाका कार्यक्रम हेर्दा देशका अनेकौं स्थानका चर्चमा कार्यक्रम गरेको देखिएको छ। समाचार अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।